သူတို့အတွက်၊ ငါတို့အတွက် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရိုသေမြတ်နိုး လက်စုံမိုးလို့ ဦးခိုက်ကန်တော့ပန်းဆင်ရင်း ဘုန်းဘုန်းရဲ့ စာကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကွယ် ဦးသိန်းစိန်
ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ဖျက်ဆီးသူများ.. “၀ံသာနု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့” »
# သူတို့အတွက်၊ ငါတို့အတွက် #
ဧပြီ ၈ ၊ ၂၀၁၅
အမုန်းတရားတွေ မီးရှို့ ထားတယ်။
မျက်မှောက်ကာလ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကို ပြောရလျှင် မြတ်ဗုဒ္ဓဖြေကြားသော ကောသလအိပ်မက် ၁၆-ချက်မပါဘဲ မပြီးနိုင်ဟု ဆိုရမလိုပင် ဖြစ်နေပေပြီ။ အလျဉ်းသင့်သောကြောင့် ကောသလမင်း အိပ်မက် ၁၆-ချက်မှ အမှတ်စဉ်(၈)ကို
(အိုးငယ်ချည်းနှီး၊ အိုးကြီးရေလျှံ၊ အိုးကြီးကိုပဲ၊ ရေဆွဲလောင်းပြန်)
ရေမရှိသော အိုးတို့ဖြင့် ခြံရံအပ်သော ရေပြည့်အိုးကြီး တစ်လုံးကိုမြင်ရ၏။
လူတို့သည် အရပ် ၈ မျက်နှာမှ ရေကို ယူလာကြ၍ ထိုရေပြည့်အိုးကြီးအတွင်းသို့သာလျှင်
လောင်းထည့် ကြ၏။ လောင်းထည့်သော ရေတို့သည် ပြည့်လျှံ၍ ကျကုန်၏။
ဤသို့လျှင် အဖန် တလဲလဲ ရေပြည့်အိုးသို့သာ လောင်းလျှက် ရေမရှိသောအခြံအရံ
အိုးတို့ အတွင်းသို့ကား မည်သူမျှ မလောင်း မထည့်ပဲ နေသည်။
(ဆင်းရဲသူများ၊ ၀တ်စားမကျန်၊ အခွန်တွက်၊ နှိပ်စက်ငွေတောင်းခံ)
နောင်အခါ မကောင်းသော မင်းတို့ လက်ထက်၌ မင်းနှင့်တကွ လူတို့ တရားပျက်ကွက်၊သြဇာညံ့ဖျင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်ကြကုန်လတ္တံ့။
ထိုအခါမင်းအစိုးရတို့သည် ဆင်းရဲသားတို့အား မင်း၏ အကျိုးစီးပွား အတွက်ကိုသာ လုပ်ကိုင်စေအံ။ ဆောင်ရွက် စေအံ့။ ထမ်းရွက်စေအံ့။ သို့ဖြစ်ရကား မင်းတို့၌သာပြည့်စုံ အကျိုးခံစားကြရ၍ ဆင်းရဲသားတို့မှာ ရေမရှိသော အိုးတို့ပမာတစုံတရာမရှိ ငတ်မွတ်
This entry was posted on April 9, 2015 at 6:29 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.